Unqulo & Umoya Inkolo yakwaBudda
Eyona ndlela ihamba phambili kwiiNkcubeko zomibini
Umxholo oyintloko kwiBuddhist Mindfulness umkhuba uqwalasela ukungapheli (aniccha). Kukho unxibelelwano olunzulu phakathi kwamava okungagxininisi kwiNgqondo kunye nomxholo weTao weQi (Chi) njengasetyenziswa kwiyeza laseMpuma Asia kunye nobugcisa bokulwa. Ngomqondo othile, basondela kwinto efanayo kwizinto ezichaseneyo kodwa ezingabonakaliyo. Ngengqondo ngokuqhelekileyo, sithobela ingqalelo kwiimeko eziqhelekileyo: imifanekiso yengqondo, intetho yangaphakathi, imizimba yomzimba kunye nemizwelo.
Njengomphumo wale nto, ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba amava aqhelekileyo abe yinto engavamile. Iingcamango neemvakalelo ziyahlukana kumbane okhulayo owandisa, iikontraka, zithintela kwaye zitshintshe. Ngamanye amagama, "Qi" !!
Isiqhelo seQigong (kunye ne- Inner Alchemy ) siqala ukusuka kwesinye siphelo. Iquka ukuzivocavoca okusebenzayo kumava okuhamba kwamandla. Ukudibanisa le miba emibini, ngoko, kukubiza iindawo ezilungileyo zezo zombini. Uqeqesho lweBuddh Mindfulness lwandisa ukunakwa kwethu kunye nokuqonda izakhono, okusivumela ukuba sibone amandla omzimba / amazululatory aphantsi kwamava aqhelekileyo. Ngakolunye uhlangothi, i-Qigong ngokuzenzekelayo isebenza ngamandla - kwaye ekubeni sineglasi yokukhumbuza sikwazi ukuqonda kakuhle ukuba kusebenze ukucima.
Kwimichiza yaseTshayina, impilo ihambelana nokuhamba okulula, okuninzi kunye nokulinganisela kwe- qi ngokusebenzisa i- meridians . Ukukhuphazeka, ngakolunye uhlangothi, kubonakala xa kukho ukungabikho, ukuguquka okanye ukungalingani kwalokhu kuhamba kweQi.
I-Qigong isetyenziselwa ukuxhasa ukungaphumeleli kwamandla, kunye nokuhamba kwesigxina kunye nokudala ukuhamba okuhambelana nobomi bokuphila ngokusebenzisa iziteshi zomzimba zolwazi (meridians). Ekubeni ingqiqo isifundisa ukuba sivulekele - kunokuba i-congeal ejikelezileyo-ingqondo yangaphakathi / amava emzimbeni, iyancoma ngokugqibeleleyo kwaye iqinisa iinkqubo eziqaliswe yi-Qigong.
Ukuhlanganiswa kwezi ziqhelo zobuBuddha neTaoist ngokokuphakamisa ubuchule bokuphilisa kunye nokuqonda kwiNdawo yethu yoBwenyaniso.
Kuthetha ukuthini oko, ngokokusebenza kwakho kwansuku zonke? Isiphakamiso ukuguqula kwakhona naphakathi phakathi, ngakwesinye icala, iinkqubo ezisisiseko somzimba ezifana ne-qigong (okanye i-yoga asana); kwaye, ngakolunye uhlangothi, ukucamngca ngengqiqo okanye ukubuza imibuzo ngokomoya . Ngale ndlela, ukulungelelaniswa komzimba osisigxina kunye nomzimba, kunye nokucaciswa kwengqiqo yakho, kuya kwenzeka ngeendlela ezixhasayo kunye nokwenkxaso. Bobabini umzimba kunye nengqondo ingakwazi ukuvela njengendlela yokubonakalisa ingqiqo yakho yokomoya.
Sibonga ngokukhethekileyo kwiShinzen Young kunye noShelly Young, bobabini ababenegalelo ngeendlela ezibalulekileyo kule nqaku.
I-Tao, Izinto Ezilishumi-Iwaka kunye ne-Dongshan Zinqanaba ezinhlanu
Izikhokelo Eziyisiseko kunye neengxowa zeBuddhism
UbuBuddha: Iimpawu ezintathu zokuba zikhona
Izithuba ezintlanu ze-Pentatonic Scale for Guitar
Biography yeArata Isozaki
Iiprogram zokuSebenza ngokuphindaphindiweyo 2-3 IiDigit
Ngaba Ndifanele Ndizuze iSigqeba soLawulo lweMngcipheko?
I-Golf Slang: Funda i-Lingo esetyenzisiweyo kwi-Course